Taageerayasha madaxweyne Trump oo doon rogmatay ‘sawirro’ | XORRIYA NEWS
Home Wararka Taageerayasha madaxweyne Trump oo doon rogmatay ‘sawirro’
Dhowr doonyood ayaa ku degay haro ku taal gobolka Texas ee dalka Mareykanka intii lagu guda jiray dhoolatus lagu taageerayay madaxweyne Donald Trump doorashada dhici doonta November, sida ay saraakiishu sheegeen.
Masuuliyiintu waxay sheegeen in mawjadaha iyo kacsanaanta haradu ay u badan tahay inay sababeen markabbo fara badan oo kusii jeeday harada Lake Travis, oo u dhaw caasimada gobolka, Austin.
Sawirro laga soo qaaday ayaa u muujinayey doomo wata calanka ololaha Trump oo ka dhaqaaqaya aafaafka haradaasi.
Wararka ayaa sheegaya in dadkii saarnaa laga badbaadiyay biyaha, aysanna jirin cid wax ku noqotay.
Dabbaaldeggan, oo loogu magac daray Lake Travis Trump Boat Parade, ayaa laga abaabulay Facebook, in ka badan 2,600 oo qof ayaa isku calaamadeeyay inay ka soo qeyb galeen.
Baadhitaan ayaa la bilaabay mana jiraan wax caddeyn ah oo ku saabsan in falkaasi u dhacay si ulakac ah, ayay tidhi af hayeenka Xafiiska Travis County, Sheriff Kristen Dark.
“Waxaan ka jawaabnay wicitaanno badan oo doomaha dhibaataysan ah, dhowr ka mid ahna ay degeen,” ayay tidhi. “Doonyo aad u tiro badan ayaa maanta joogay harada … Markii ay dhammaantood bilaabeen inay hal mar wada socdaan, waxay abuurtay hirar waaweyn.”
Dhacdadu waxay dhacday abbaare 12:00 (17:00 GMT) Sabtidii, usbuuca dhammaadka Maalinta Shaqaalaha ee Mareykanka. Wararka ayaa sheeegaya in doomaha laga codsaday inay ku kaxeeyaan 10mph (16km / saacaddii).
Paul Yura, oo ka tirsan Adeegga Cimilada Qaranka ee Austin / San Antonio, ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Associated Press in aysan jirin wax duufaanno ah oo ka dhacay aagga xilligii dhoollatusku socday.